Ganacsade Abuukar Cadaani oo ay ka awood roonaan waayeen kadib dagaalkii ay ku soo qadeen isbaheysiga dagaaloogayaasha Muqdisho.
Dagaal ka socdey afar maalmood duleedka waqooyi bari Xamar oo ay soo qadeen isbaheysiga la dagaalanka wadaadada oo horay loogu yaqaanay dagaaloogayaasha Muqdisho, kaas oo ay ku soo qadeen ganacsade Abuukar Cadaani ayaa ku dhamaaday guuldaro kadib markii dagaaloogayaasha Muqdisho uu midba midka kale uu ka shakiyey inuu dagaalka uga baxo, maleeshiyadiisana ay dhibaatada xoogeedu ay ku dhacdo.
Dagaalkan kii ka horeeyey oo ay isbaheysigaas ku soo qaadeen wadaadada degen koofurta Muqdisho ayaa guuldaro isna ku dhamaaday kadib markii la isaga kala baxay mudane Qanyare iyo wadaadada.
Dagaalka lagu qaaday Abuukar Cadaani ayaa u muuqda mid loogu dan lahaa in marka hore wadaadada waqooyiga Muqdisho loo taliyo. Isbaheysiga oo ay u badan yihiin dagaaloogayaasha ka soo jeeda waqooyiga Muqdisho ayuu Qanyare ka codsaday nimankaas haddii ay ka daacad yihiin la dagaalanka wadaadada iney dagaalka ku bilaabaan wadaadada awooda ku leh waqooyiga Muqdisho. Bashiir Raage oo doonaya inuu arrintaas ka daweeyo mudane Qanyare ayaa bilaabay dagaalka lagu qaaday Xaaji Abuukar Cadaani.
Sidoo kale ayeey dagaaloogayaasha waqooyiga Muqdisho ay ku eedeeyeen Ganacsade Abuukar Cadaani inuu isbaheysi qabiil la galay dadka degen koofurta Muqdisho oo horay dagaal uu u dhexmaray dadka degan waqooyiga Muqdisho. Qanyare oo ay arrintaas culaab ku heysey ayaa codsaday in xiriirkaas la fashiliyo si aysan waqooyiga iyo koofurta Xamar aysan u yeelan xiriir soo celiya tolnimadii ka dhexeysey labada dadweyne.
Xoogii ay ku duuli lahayeen dagaaloogayaasha waxaa kala daadiyey madaxda dhaqanka oo u arkay dagaalka mid laga dhex qarxiyey laba nin oo walaala ah, sidaasna waxaa isku tari waayey duulaankii kadib markii maleeshiyooyinkii gurmadka ay reerahoodi kala wateen.
Ganacsade Abuukar Cadaani oo ka xun dagaalka lagu soo qaaday iyo dhibaatada loo geystey ayaa haddana wuxuu diyaar u yahay inuu nabad la galo isbaheysiga dagaaloogayaasha Muqdisho si aysan u sii socon dagaalka ka bilowday isaga iyo Bashiir Raage. Mudane Cadaani ayaa aaminsan dhimashada iyo dhaawaca inuu yahay mid soo gaaraya beesha ay kawada tirsan yihiin isaga iyo Bashiir Raage, wixii gurmada oo ka yimaada Muuse Suudi iyo Maxamed Dheerena ay weli sii kordhineyso qasaaraha maal iyo naf soo gaaraya beeshooda. Wuxuuna xaajigu u arkaa xalka keliya oo jira inuu yahay in la iska dabaqabto colaada dagaalka inta nin walba uu hankiisa iyo muruqiisa uu u talin lahaa.
Dagaalka Bashiir Raage iyo Abuukar Cadaani ayaa weji gabax ku noqday dadka ka soo jeeda dagaanada Muqdisho, waxeyna ugu muuqatay labada kooxood ee kala taageeraya labadaas nin kuwo ka baxay mudnaanta ay u hayeen dadweynaha Muqdisho oo kala ahaa in dagaaloogayaashu ay ka difaacaan Itoobiya iyo madaxda Soomaaliyeed oo ay ku shaqeysaneyso, iyo in wadaadada ay Muqdisho ka abuuraan xeer u kala garqaada dadka isku heysta dacwadaha.
Wadamada shisheeyaha ayaa ka muujiyey dagaalkaas mid u dhexeeya wadaado xagjira iyo dhiigyacabyo qabqabla dagaala oo 15 sanno dadka rayidkaa dhiigooda daadinayey. Waxeyna u arkaan laba kala daran oo aan isdoorin. Awooda ay ku dagaalamayaan oo salka ku haysa maamulka Muqdisho waxey ugu muuqataa inuusan midkoodna mudneyn.